Yini ongayibona eSantander: ulwandle, izintaba, ifa lobuciko kanye ne-gastronomy | Ukuhamba kwe-Absolut
Mhlawumbe uke wazibuza ukuthi uzobona ini eSantander uma uhlela uhambo olunqamula esifundeni sase Cantabria. Ngobuhle futhi obuhlukahlukene, idolobha selithuthukile ekushiseni kwezokuvakasha selokhu inkosi yenze imfashini njengendawo yamaholide U-Alfonso XIII. Kepha amandla ayo kwezomnotho asedlulile, ikakhulukazi aqala ngekhulu leshumi nesithupha leminyaka lapho eba khona Indlela yeLanas futhi yahlanganiswa njengechweba lase I-Castilla.
Yize ahlupheka ngokwesabekayo umlilo Ngo-1941, okwacekela phansi ingxenye enhle yesikhungo sayo esingokomlando, kuningi okufanele ubone eSantander. Ngaphezu kwalokho, inhlokodolobha yezintaba idolobha elincane ongalihlola ngezinyawo futhi elikunikeza okungajwayelekile gastronomy. Uma ufuna ukuthola ukuthi wenzeni eSantander, sikumema ukuthi usilandele.
1 Yini ongayibona eSantander: izakhiwo zasolwandle nezomlando
1.1 ICathhedral Church of Our Lady of the Assumption
1.2 I-Paseo de Pereda
1.3 Isigodlo saseMagdalena
1.4 UMtapo Wezincwadi WaseMenéndez Pelayo neNdlu
1.5 Isakhiwo esiyisikhumbuzo sesigodlo saseRiva-Herrera
1.6 Isibhedlela iSan Rafael
1.7 ISonto le-Annunciation nePlaza Porticada
1.8 Ezinye izakhiwo ongazibona eSantander
1.9 Amabhishi, into yokuqala ongayibona eSantander
1.11 Amapaki aseSantander
1.12 I-Puerto Chico
2 Yini ongayidla eSantander
3 Kunini lapho kufanele uvakashele inhlokodolobha yaseCantabrian
4 Ungafika kanjani eSantander
Yini ongayibona eSantander: izakhiwo zasolwandle nezomlando
Inhlokodolobha yaseCantabrian inhle kakhulu amabhishi, indawo enhle kakhulu futhi ebalulekile amagugu amakhulu lokho akuyekile ukukhula. Sizobona ezinye zezinto ezivelele.
ICathhedral Church of Our Lady of the Assumption
Leli thempeli elihlaba umxhwele lakhiwa phakathi kwekhulu le-XNUMX nele-XNUMX kudala Abbey Wezindikimba Ezingcwele, lapho bangcwatshwa khona I-Saint Emeterio y Saint Celedonius, amaphethini wedolobha. Isonto lalo gothic ukuthi ilahlekelwe yingxenye enhle yengcebo yayo kulo mlilo oshiwo ngenhla, yize kwenziwa umsebenzi omkhulu wokwakha kabusha.
It Ubuye eziningana amasonto ama-baroque ezenziwe nguFernando Herrera, uJuan Alvarado noSebastián de la Puebla. Omunye wabo ubeka ithuna lika UMenéndez Pelayo, nguVictorio Macho. Iphinde ine eliyigugu isitayela se-gothic cloister.
I-Paseo de Pereda
Akungabazeki ukuthi esinye sezimpawu zedolobha. Uhambo olude olusuka enkabeni luye endaweni yase I-Puertochico ngokufana nolwandle ngakho inikeza imibono emangalisayo yetheku. Lesi simo, kanye neqiniso lokuthi kuhlala ezinye zezakhiwo ezivelele kakhulu kuleli dolobha njenge Indlunkulu yaseBanco Santander noma i Isigodlo seSpanish Transatlantic Company, kuholele esimemezelweni Indawo Yomlando Yezobuciko.
Eyakhelwe ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX ukuze isebenze njengendawo yokuhlala yomndeni wasebukhosini ngamaholide abo, itholakala e- inhlonhlo wegama elifanayo naphambi kwe- Isiqhingi iMouro. Ngakho-ke, ukubukwa okuvela ezingadini zayo ezinhle kuyamangalisa.
Ukwakhiwa kwe- isitayela se-eclectic ehlanganisa ithonya lezithabathaba zamaNgisi nesitayela saseFrance futhi nangokwakhiwa kwezakhiwo zezimbali. Ifaçade yayo enkulu inemibhoshongo emibili enezinhlangothi ezine kanye nezitebhisi ezinemigqa emibili futhi yonke yakhiwe ngamatshe okwakhiwa ngawo kanye nesilayidi ophahleni.
Kamuva, kunezelwa ezinye izitebele ezakha kabusha i- isigodi sesiNgisi. Okwamanje ikomkhulu le- I-Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
UMtapo Wezincwadi WaseMenéndez Pelayo neNdlu
Njengokwazi kwakho, UMarcelino Menéndez noPelayo wayengomunye wabantu abavelele kakhulu abazalwa edolobheni. Ngakho-ke, akumangazi ukuthi okuningi azokubona eSantander kuhlobene naye. Lokhu kunjalo ngalesi sakhiwo esihle kakhulu esigcina umtapo waso omkhulu futhi esakhiwe ndawonye nomuzi womndeni waleli qhawe.
Kungokwaka isitayela somlando ngezinto ezibalulekile ze-Herrerian. I-façade yayo yakhiwe ngezitebhisi ezinezigaba ezimbili ezifinyelela emvuthwandaba ngomnyango omkhulu onekhothamo elehlisiwe elizungezwe amafasitela amane amakhulu. Engadini, ungabona futhi umfanekiso wesazi owenziwe ngu Mariano benlliure.
Isakhiwo esiyisikhumbuzo sesigodlo saseRiva-Herrera
Lesi sakhiwo, esidala kunazo zonke edolobheni ngokwakhiwa komphakathi, sendaweni yasePronillo futhi sikhona Impahla Yezintshisekelo Zamasiko. Lesi sakhiwo sakhiwa ngumbhoshongo wangenkathi ephakathi, izindonga nobuhle Isithabathaba sobuKrestu Ikhulu le-XNUMX. Kulesi sakamuva, i-façade yayo igqamile, inompheme onamakhothamo amabili ayizingxenye, nama-cornices ayo, anamalangabi nama-gargoyles.
Akuyona le eseRiva-Herrera, ingasaphathwa eyikhaya elihloniphekile edolobheni. Sincoma nokuthi uvakashele izigodlo ze amahlathi kaphayini futhi i UMarquis waseCasa Pombo. Ngaphandle kokukhohlwa okuncane Isigodlo se-Embarcadero.
Isibhedlela iSan Rafael
Lesi sakhiwo esihle senkantolo neoclassic Yakhiwa ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX ukuvala isibhedlela esidala iMercy. Imengamo ye-façade ivelele kuyo, eyakha uvulandi, kanye nebala elingaphakathi elinephaseji eyisikwele. Njengamanje, kuyindlunkulu ye- Iphalamende laseCantabria.
ISonto le-Annunciation nePlaza Porticada
Esokuqala, simenyezelwe Impahla Yezintshisekelo Zamasiko, ikhipha okungcono kakhulu kwe- izakhiwo zokuvuselela eCantabria. I-pediment ne-arch semicircular ye-façade yayo iyagqama, kanye ne-dome ene-lantern ngaphakathi.
Mayelana ne isikwele se-porticada noma uPedro Velarde (iqhawe laseCantabrian leMpi Yenkululeko), ngenye yezindawo okufanele uzibone eSantander. Yakhiwa ngemuva komlilo owesabekayo esasikutshele ngawo kodwa uyaphendula Isitayela se-Neoclassical Herrerian ngokukhuthazwa amasiko amadala ayesendaweni.
Ezinye izakhiwo ongazibona eSantander
Idolobha lisenezinye izakhiwo eziningi ezikufanele ukuvakashelwa nguwe. Phakathi kwabo, esanda kuvulwa Isikhungo seBotín, ukwakhiwa okumangazayo nokwesibindi okudizayinwe nguRenzo Piano; i Isigodlo Somama Abampofu Abomama baseSanta Cruz, eyakhiwe ngekhulu leshumi nesikhombisa futhi okuyi Impahla Yezintshisekelo Zamasiko; the imakethe yasempumalanga, yamiswa ngo-1842; amasonto Saint Lucia y i-San Francisco futhi i Inqaba yaseCorbanera, Okuyiwona futhi Impahla Yezintshisekelo Zamasiko.
Amabhishi, into yokuqala ongayibona eSantander
Unamabhishi amahle kakhulu eSantander afana neLos Peligros, i-El Camello noma iLos Molinucos. Kepha okuthandwa kakhulu yi- leyo yeSardinero, onqamula indawo engasogwini eqala kuReina Victoria Avenue. Eqinisweni, kumayelana namabhishi amabili ahlangana lapho igagasi likhuphuka, lakhe isihlabathi eside.
Ngaphandle kokungabaza, kuyindawo engcono kakhulu ongayijabulela emanzini oLwandle lwaseCantabrian. Futhi, ohambweni olude lolwandle ungabona izakhiwo ezinhle njengalezo ze- Ihhotela laseRoyal noma lokho kwe Grand Amakhasino, lesi sakamuva isakhiwo esihle se-neoclassical esinokuthintwa kwesimanje esakhiwe ngo-1916. Konke lokhu ngaphandle kokukhohlwa Izingadi zePiquío ngombono wayo omuhle kanye ne Ipaki iMesones.
Okufuna ukwazi ngokwengeziwe yi- Ibhishi lasePuntal, yize ingekho eSantander. Uma uthatha eyodwa ye amatshe ayizinsimbi, izikebhe ezisuka esigodlweni sase-Embarcadero, ungafinyelela kulesi sandlana esisendaweni yase singa. Kunamakhilomitha amabili nohhafu wolwandle noLwandle lwaseCantabrian ezinhlangothini zombili nokubukwa okuhle kwaleli chweba.
Sesikutshelile ngeBotín Centre, enehholo lombukiso elihlaba umxhwele elizinikele emikhakheni ehlukahlukene yezobuciko. Kepha ungabona neminye iminyuziyamu. Ngokwesibonelo, uLwandle lwaseCantabrian o lowo onamanzi. Kodwa-ke, phakathi kwazo zonke, kukhona ezimbili okufanele uzibone eSantander.
UGran Casino de Santander
Esokuqala sithi Museum of Prehistory kanye ne-Archaeology yaseCantabria, okwamanje etholakala esakhiweni se-East Market. Ihlala elinye lamaqoqo obuciko we I-paleolithic ephezulu Okubaluleke kakhulu emhlabeni. Kepha futhi kusuka kwezinye izikhathi njengeChalcolithic noma iBronze Age futhi muva nje.
Eqinisweni, amagugu akhe amabili yiwo UPatera de Otañes, ipuleti elenziwe ngegolide nesiliva ngezikhathi zamaRoma, nalokho okuthiwa Igugu eliphakeme lasendulo lika-Ambojo, iqoqo lezinhlamvu zemali zeCastilian ne-Aragonese zekhulu le-XNUMX nele-XNUMX.
Ngokuqondene nowesibili, yi Imyuziyamu Yezobuciko Zanamuhla Nezesimanje ZaseSantander naseCantabria, owake waba yiMuseum of Fine Arts. Itholakala esakhiweni esifanayo neMtapo Wezincwadi iMenéndez Pelayo futhi igcina iqoqo elibalulekile lokudweba nokubaza okuphakathi kwekhulu le-XNUMX kuya kwele-XNUMX. Okubaluleke kakhulu yimisebenzi yezikole zase-Italiya, eFlemish naseSpain.
Idolobha laseCantabrian linezindawo eziningi eziluhlaza. Eminye, efana nezingadi zePiquío noma izingadi zaseMagdalena, sesivele sishilo kuwe. Kepha phakathi kwabo kuvelele ILas Llamas Atlantic Park, esesigodini segama elifanayo. Ihlanganisa indawo engaba amahektha ayishumi nanye okuyikhaya lomcebo omkhulu wezimbali nezilwane futhi enemizila yamabhayisikili neminye ingqalasizinda yezemidlalo. Phambi kwale ndawo eluhlaza kukhona ISantander Exhibition Centre. Futhi, uma uthanda ibhola lezinyawo, nawe unayo Inkundla entsha yase-El Sardinero, lapho kudlala khona iReal Racing Club.
Ukuqedela, sincoma ukuthi uthathe uhambo lokuvakashela indawo yasePuerto Chico, eyake yaba ngumsebenzi wasolwandle ohamba phambili futhi namuhla enezindlu Ithebula lezokungcebeleka, itheku lezemidlalo. Futhi kungenye yezinto ezinhle kakhulu izindawo ze-tapas neziphuzo kusuka edolobheni, ikakhulukazi imigwaqo iHernán Cortes, iJuan de la Cosa, iSanta Lucía noma iPlaza de Cañadío.
Yini ongayidla eSantander
Sesivele sikhulume cishe ngakho konke onakho ukukubona eSantander. Kepha lokhu esisanda kukutshela khona ngePuerto Chico kusiholela ekutheni sikutshele nge-gastronomy enhle kakhulu yedolobha. Ngakho-ke, uzophinde uthole amandla ngemuva kokuvakashelwa okungaka.
Njengoba kuyidolobha elisogwini, kunengqondo ukuthi iSantander inendawo enhle kakhulu inhlanzi ne-shellfish evela oLwandle lwaseCantabrian. Kepha futhi iyinhloko-dolobha yomphakathi lapho kugcwele khona imfuyo nemikhiqizo yensimu. Kukho konke lokhu, singakutshela ukuthi i-gastronomy yeSantander iphelele ukuvumelana kolwandle nezintaba.
Ngokuqondene neyokuqala, ikwenzile ama-anchovies avela eSantoña, edume umhlaba wonke. Kuholele naku ingwane kungenye yezitsha ezisetshenziswe kakhulu. Futhi kungashiwo okufanayo ngeresiphi ethatha i-tuna njengesisekelo sayo: the imbiza, umzala wokuqala weBasque marmitako kodwa obambela upelepele ngezingcezu zesinkwa futhi sphiwe.
Ngokuqondene nenyama, kufanele uzame eSantander izitsha zobukhazikhazi Inkomo yaseCantabrian, iwundlu, izingulube zasendle nezinyamazane. Zonke zilungiselelwe ngezindlela ezahlukahlukene kepha, ngokwesibonelo, kufanele u-ode ithenda yenkomo ngoshizi weTresviso.
Okunamandla ngokwengeziwe yi Isitshulu sentaba, enamabhontshisi amhlophe namakhola ahambisana ne-compango, okungukuthi, i-chorizo, isoseji yegazi, ubhekeni nezimbambo ezihlanjululwe. Okuhlukile kukho lebaniego stew, yize ijwayelekile endaweni enentaba yaseLiébana. Lokhu kufaka ubhontshisi ngezinkukhu ezivela kumaPotes namakhabishi namazambane.
Ekugcineni, maqondana nama-dessert, yonke iCantabria inhle kakhulu ushizi. Kodwa ezintathu zazo zinegama lendabuko: ukhilimu, iBejes-Tresviso kanye nalokho okubizwa ngokuthi ama-quesucos esigodini saseLiébana. Kepha, uma ukhetha okuthile okumnandi, kufanele uzame sobaos pasiegos futhi, ngaphezu kwakho konke, i UQuesada Pasiega, okwenziwa ngobisi lwenkomo, ibhotela, ufulawa, ushukela, amaqanda nesinamoni eligayiwe noma ulamula.
Ukuqedela ukudla kwakho, unga-oda i- Amaphoyinti pomace, enokuqukethwe okuphezulu kotshwala kodwa kuthathwa ngamanani amancane. Unazo ezinambithekweni ezahlukahlukene njengezinyosi noma amakhambi, kepha zonke zimnandi.
Kunini lapho kufanele uvakashele inhlokodolobha yaseCantabrian
Okubaluleke njengokuthi ubone ini eSantander ukuthi wazi isikhathi esihle sokuyivakashela. Ngaphandle kokungabaza kunjalo ehlobo, lapho isimo sezulu sifudumele ngaphandle kokushisa nedolobha liyaphithizela ngopopayi. Ngaphezu kwalokho, cishe ngoJulayi 25, kukhona amaqembu leyo eyeNzalo Yezokuvakasha Yesifunda.
Kodwa-ke, uma ungomunye walabo abafuna ukuthula okungaphezulu, intwasahlobo futhi yisikhathi esihle sokuhambela eSantander. Isimo sezulu simnandi futhi azikho izivakashi eziningi njengasehlobo.
Ungafika kanjani eSantander
Inhlokodolobha yaseCantabria inayo Isikhumulo sezindiza samazwe omhlaba. Iphethe igama leSeveriano Ballesteros futhi itholakala edolobheni elingumakhelwane lase UCamango, nje amakhilomitha ayisithupha ukusuka eSantander. Ukufika kulokhu, unemigqa eminingana ye- amabhasi asedolobheni.
Isikhumulo sezindiza saseSantander
Le ndlela efanayo yokuhamba ixhuma inhlokodolobha yaseCantabria namadolobha amakhulu aseSpain. Kepha, uma uthanda, ungasebenzisa i- ujantshi ukufika eSantander. Kukhona izitimela zombili ezivela Madrid njengaseBilbao nase-Oviedo okushiya edolobheni elifanayo.
Ekugcineni, uma uhamba ngemoto yakho, umgwaqo ongena entshonalanga yi S-20 umgwaqo omkhulu, ngenkathi uvela empumalanga kufanele ufike ngo S-10, ngathi uvela eningizimu. Uma usedolobheni futhi uma ufuna ukuzivocavoca umzimba, unenkonzo kamasipala ye- ukuqashwa kwamabhayisekili.
Sengiphetha, sichaze okufanele sikubone eSantander nangezinto eziningi ezenziwa yidolobha laseCantabrian. Ikona enye yezinto ezinhle kakhulu eSpain futhi inakho konke: imvelo namabhishi, amagugu amakhulu, i-gastronomy enhle kakhulu nabantu abamukelayo nabanobungane. Awuzizwa uthanda ukuyivakashela?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Yini ongayibona eSantander